Nchoputa ugwo na StumbleUpon Ads | Martech Zone
Akụkụ nke nsogbu ndị nwere nnukwu ọdịnaya bụ ikike maka ọdịnaya ahụ iji chọpụta ma kesaa. Anyị na-arụsi ọrụ ike na afọ gara aga iji chọpụta ọdịnaya anyị - ọ na-arụ ọrụ. Site na oge ezumike ezumike dịkarịsịrị ala, nleta anyị na-esite n'ihe dị ka nleta 60,000 kwa ọnwa ruo nleta 70,000. Ebe ọ bụ na anyị nwere ndị nkwado, ọ dị mkpa na anyị ga-aga n'ihu na-ewebata ọdịnaya ahụ n'ime ndị ọhụụ ọhụrụ ma nwalee ụzọ ọhụrụ.
Otu n'ime ụzọ anyị nwalere n'oge na-adịbeghị anya bụ Nchọpụta akwụkwụkwụ ụgwọ StumbleUpon. Ọ bụ ezie na ọnụ ahịa onye ọbịa ọ bụla adịghị ọnụ, enwere ụfọdụ atụmatụ mara mma nke sistemụ ahụ. Ihe m na-enwe obi uto banyere nnyefe a na-akwụ ụgwọ bụ na ọ na-enyekwa nzaghachi ozugbo na ọdịnaya anyị na-ekerịta na ihe na-adọta uche kachasị. Ọ bụ ezie na StumbleUpon na-emesi echiche ndị ahụ site na interface ha, ịkekọrịta organic na-emekwa.
Nchọpụta akwụkwụkwụ ụgwọ StumbleUpon
Ndị ọbịa ga-ekwe nkwa - Adaberela na mgbasa ozi ma ọ bụ njikọ. Mafere otu nzọụkwụ na ụgbọala ndị ị na-ege ntị na URL gị (weebụsaịtị, vidiyo, peeji nke ọdịda).
Ọnọdụ dị mkpa - Ọnọdụ saịtị gị yana ọdịnaya dị mkpa dị ka akụkụ nke iyi saịtị saịtị ndị otu ọdịmma jikọtara. A ga-etinye saịtị gị n'etiti ndị kacha mma weebụ, na edemede ị họọrọ.
Lezienụ otu onye ọbịa pụrụ iche - Lezienụ maka ndị kwere ekwe, ndị ọbịa pụrụ iche na mmefu ego ị na-achịkwa. Onweghi ego pere mpe ma nweghi ego choro.
Akụkụ na-akụda mmụọ nke StumbleUpon idgwọ Achọpụtara bụ ọrụ aka. Nweghị ike ịgbakwunye ndepụta na sistemụ ma nweta ya na-akwalite edemede ọ bụla. A ghaghị itinye URL ọ bụla ma jikwaa ya. The mmefu ego ka atọrọ ka a kwa ụbọchị ego, ma i nwere ike ọ bụghị naanị ịtọ a ngụkọta mmefu ego ịkwụsị… na ị na-aga na na na anụ ahụ kwusi ọ bụla mkpọsa. Maka ụlọ ọrụ ndị nwere ọtụtụ ọdịnaya ịkekọrịta, ọ bụ ihe mgbu na butt. Nke ahụ bụ ihe nwute maka ụlọ ọrụ ahụ - na StumbleUpon - n'ihi na ndị ahụ bụ ụlọ ọrụ nwere ego iji mefuo.
Ka anyi nwee olile anya na ego ugwo nke StumbleUpon na agbakwunye otutu uzo nlekota oru. M na mgbe a na-akwado nke StumbleUpon na-anọgide na-enwe ekele maka ọrụ ha na-enye.
Tags: akwụ ụgwọstumbleupon mgbasa ozistumbleupon akwụ ụgwọ chọpụtara
Dec 26, 2012 na 9:44 PM
Nke a bụ ihe m kwesịrị ile anya na ya. Ana m achọkarị echiche ahịa dị ukwuu. Ekele maka ihe ịga nke ọma na ekele maka ịkekọrịta!